Maalin: Janaayo 5, 2019
Mawduuca Lojmanlar'sa Hedef TÜDEMSAŞ
Mawduuca mideynta seddexda shirkadood ee TCDD (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ TÜVASAŞ) ee ajendaha ayaa keenay TUDEMSAŞ Agaasime Guud in muddo xasiloon la helo. 2019, siyaasadaha khaldan awgood, wax kaalmo ah looma qoondeynin Maalgashiga TUDEMSAS. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo wax ka qabatay gobolada ay saameeyeen roobka barafka ilaa xalay fiidkii, ayaa ka feejigan kuwa barafka daadanaya iyo gaaska cusbo fidiya. Dhumucda barafka ilaa xNUMX cm. [More ...]
Imtixaanka Horumarinta Hawlgabka Qaranka ee Hore ee Eskisehir
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa tijaabiyay mashiinka ugu horreeya ee helicopter-ka ee Eski inehir. On ku meelaynta ee warshadaha difaaca [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay dumin doontaa Aydınlıkevler Dadka lugeynaya ee xad dhaafka ah marka loo eego cusboonaysiinta jidadka lugeeyayaasha ee soo gabagabeeyey noloshooda dhaqaale. Burburinta ka dib, dhismaha cusub ee dadka lugeynaya ee lugeynaya ayaa bilaaban doona. Sidaa darteed 6 [More ...]
Beko oo la socda CHP: vi IZBAN Dhinaca Dagaalka "
Ururka CHP iyo dadku waxay ku kulmeen degmooyinka fog fog ee xarunta Izmir CHP Izmir ku xigeenka Kani Beko, oo ah astaamaha ugu weyn ee shaqo joojinta ee Wasaaradda Gaadiidka ee IZBAN taas oo ah xukunka AKP kana baxay ujeedada shaqo joojinta, ayuu yidhi. Beko [More ...]
TCDD, Ku adkeyso soo jeedinta Hore ee IZBAN
Xafiisyada TCDD ee la yimid fuliyaasha howl wadeenada Ururka Wadada Tareenka ee ku saabsan shaqo joojinta İZBAN ma aysan soo bandhigin cusub waxayna codsadeen in soo jeedinta la aqbalo. Sida laga soo xigtay Evrensel, adeegga khadka khadka tareenka ee u dhexeeya Aliaga iyo Selcuk [More ...]
Ogeysiiska Kooraska Injineerka Khadka Tareenka: TCDD Taşımacılık A.Ş. Tabobarka shaqaalaha meheradda shaqaalaha ah ee loo shaqaaleysiinayo waaxyaha gobolka ee Agaasinka Guud ee ku saleysan kartida xirfadeed ee baaxadda leh “Shuruucda Adeegyada Shaqooyinka Firfircoon ee istihdam [More ...]
Bandhigga Jiilaalka Uludağ, oo ay soo qabanqaabisay Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa markii ugu horreysay, ayaa loo qaban doonaa samaynta kartoonnada. Looma isticmaali karo wax aan ka ahayn kartoonada guud ee ujeeddooyinka guud ah, koollo koollo ah, rinjiyeyn, baakad iyo warqad lama isticmaali doono. [More ...]
Sayniska iyo Tiknoolajiyada Maaliyadda ayaa soo wariyay in Shirkadda Shiinaha ee Shiinaha ay horumarinayso nidaam xakameyn ah oo u oggolaanaya tareenada xawaaraha sare ee Fuxing inay si toos ah u shaqeeyaan ilaa xayn 350 saacaddii. [More ...]